monoclonal antibodies အကြောင်း၊ သင်မလွတ်နိုင်သော ဆောင်းပါးကောင်း။
immunoglobulins (Ig) ဟုခေါ်သော အင်တီဘော်ဒီများသည် အထူးသဖြင့် အန်တီဂျင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသော glycoprotein များဖြစ်သည်။သမားရိုးကျ ပဋိပစ္စည်းပြင်ဆင်မှုကို တိရစ္ဆာန်များကို ခုခံကာကွယ်ပေးပြီး ပဋိဇီဝဆေးစုဆောင်းခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ antiserum တွင် အများအားဖြင့် အခြားသော မသက်ဆိုင်သော antigens များနှင့် အခြားသော ပရိုတင်း c...
Nucleic acid ဆေးဝါးများသည် ရွှေခေတ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီ၊ အရေးတကြီးဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သော အဓိကနည်းပညာများကား အဘယ်နည်း။
2021-09-24 တွင် admin မှ
အရင်းအမြစ်- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမိုက်ခရို COVID-19 ဖြစ်ပွားပြီးနောက်၊ နျူကလိကလစ်အက်ဆစ်ဆေးဝါးများကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လာစေရန် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် mRNA ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးကို လျင်မြန်စွာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ နူကလိစ်အက်ဆစ် ဆေးဝါးအများအပြားကို ပိတ်ဆို့ဆေးများဖြစ်လာရန် အလားအလာရှိသော ဆေးဝါးများ ထုတ်ဝေခဲ့သည်...
PCR Reagents ပဏာမကာလတွင် Primer Probes ၏ အတည်ပြုချက်အညွှန်းကိန်းများကို လေ့လာခြင်း
2021-09-18 တွင် admin မှ
PCR ဓာတ်ပစ္စည်းများ၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင် primers နှင့် probe များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အသင့်လျော်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုအခြေအနေများကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်တရားဝင်စမ်းသပ်မှုများ၏ချောမွေ့တိုးတက်မှုကိုသေချာစေရန်အတွက်ကြိုတင်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။ဒီတော့ စောစောစီးစီး primer probe ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုရမှာလဲ..။
စစ်ဆေးရေးမှူးများ ကြည့်ရှုရမည့် အသိပညာအချက်များကို နမူနာယူပါ။
ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ခြင်းနမူနာကောက်ယူခြင်းမှအစပြုပြီး နမူနာကောက်ယူမှုသည် အလွယ်ဆုံးဖြစ်သည်။နမူနာစုဆောင်းခြင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ မှန်ကန်သောနမူနာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်၊ သင့်လျော်သောနမူနာကိရိယာများကို အသုံးပြုရန်နှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။I.Sample အမျိုးအစား Common sam...
nucleic acid aerosol ညစ်ညမ်းမှုအတွက် နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်
2021-09-10 တွင် admin မှ
PCR နည်းလမ်းများနှင့် nucleic acid aerosol သည် nucleic acid စမ်းသပ်သည့် ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် ညစ်ညမ်းစေသော ဒင်္ဂါးပြား၏ နှစ်ဖက်နှင့်တူသည်။ရနိုင်သည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ကိုသာ ရွေးချယ်နိုင်သော်လည်း လိုချင်သည်ဖြစ်စေ သုံးစွဲသည်ဖြစ်စေ မရွေးချယ်နိုင်ပေ။1. spatial ဖယ်ရှားခြင်းအောင်မြင်ရန် DNA ဖယ်ရှားခြင်းအားစစ်ဆေးခြင်း...
2021-09-08 တွင် admin မှ
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အသစ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ပြောင်းနှုန်းနည်းသော အပင်အစုအဝေးမှ အပြုသဘောဆောင်သောအပင်များကို စစ်ဆေးရန် ကောင်းသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ပထမဦးစွာ DNA ကိုနမူနာအများအပြားမှတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက်နိုင်ငံခြားမျိုးဗီဇများကို PCR မှရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။သို့သော် ရလဒ်များသည် ကွက်လပ်ဖြစ်နေတတ်သည်။
SARS-CoV-2 nucleic acid စမ်းသပ်မှု၏ အဓိကအချက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ အဘယ်ကြောင့် မှားယွင်းသော အနုတ်လက္ခဏာများနှင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း positive များ ရှိနေသနည်း။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်၊ လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်၊ သံသယလူနာများကို လျင်မြန်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် COVID-19 ကိုကာကွယ်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။အချို့သော အတည်ပြုထားသော နျူကလိစ်အက်ဆစ် ထောက်လှမ်းသည့် ဓာတ်ပစ္စည်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအချိန်တိုတို ရှိပြီး လျင်မြန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အတည်ပြုချက်၊ လုံလောက်မှု မလုံလောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများ ရှိပါသည်။
SNP ဆိုတာ ဘာလဲ၊ လူဦးရေ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ
2021-08-27 တွင် admin မှ
SNP ဟူသော စာလုံးသုံးလုံးသည် လူဦးရေမျိုးရိုးဗီဇကို လေ့လာရာတွင် နေရာအနှံ့တွင်ရှိသည်။လူ၏ရောဂါသုတေသန၊ ကောက်ပဲသီးနှံပုံစံအနေအထား၊ တိရိစ္ဆာန်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် မော်လီကျူးဂေဟဗေဒ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အခြေခံအဖြစ် SNPs များ လိုအပ်ပါသည်။ဒါပေမယ့် ခေတ်သစ်မျိုးရိုးဗီဇကို နက်နက်နဲနဲ နားလည်မှု မရှိသေးရင်...
LncRNA reverse transcription ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့မြှင့်တင်မည်နည်း။
lncRNA အင်္ဂါရပ်များ- 1. lncRNA များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရှည်လျားပြီး ကွဲပြားသော အသွင်အပြင်နှင့် မတူညီသော ခွဲခြမ်းနည်းများဖြင့် ကွဲပြားနေပါသည်။2. coding genes နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက lncRNA သည် များသောအားဖြင့် နိမ့်ပါသည်။3. lncRNA အများစုသည် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သိသာထင်ရှားသော ယာယီနှင့် spatial ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ သီးခြားလက္ခဏာများရှိသည်။
PCR ထုတ်ကုန်ညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက် အဓိကဖြေရှင်းချက် လေးခု
2021-08-12 တွင် admin မှ
1： စမ်းသပ်ဆဲပစ္စည်းများကို အချိန်မီသတ်မှတ်ခြင်း (NTC) အနုတ်လက္ခဏာထိန်းချုပ်မှုကို အစားထိုးပြီး အကြိမ်များစွာ ထပ်လုပ်ပါ။ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် PCR ထုတ်ကုန်များ ညစ်ညမ်းမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက၊ စမ်းသပ်ထောက်ပံ့မှုအားလုံးကို အချိန်မီ အစားထိုးပါ။ဥပမာ- ပြန်လည်ဆေးကြောပြီး primer များကိုပြင်ဆင်ပါ၊ pipette ထိပ်ဖျားကို ပြန်လည်ပိုးသတ်ပါ၊ E...
Dual-function RT-PCR အင်ဇိုင်းနှစ်ခု
ရိုးရာပြောင်းပြန်စာသားမှတ်တမ်းများသည် မြင့်မားသောအပူချိန်ကို သည်းမခံနိုင်ပါ (MMLV လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အကောင်းဆုံးအပူချိန်မှာ 37-50°C၊ နှင့် AMV သည် 42-60°C)။ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ဗိုင်းရပ်စ် RNA သည် အပူချိန်နိမ့်သောအချိန်တွင် cDNA သို့ ထိရောက်စွာ ပြောင်းပြန်လှန်၍ မရသောကြောင့် ထောက်လှမ်းမှု ထိရောက်မှု လျော့နည်းစေသည်။ထရာ...
Nucleic acid isothermal amplification နည်းပညာ
PCR သည် နျူကလိယအက်ဆစ် ချဲ့ထွင်မှုနည်းပညာကို အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် တိကျမှုတို့ကြောင့် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။သို့သော် PCR သည် ထပ်ခါတလဲလဲ အပူလွန်ကဲမှု လိုအပ်ပြီး ကိရိယာများနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို မှီခိုနေရသည့် ကန့်သတ်ချက်များကို မဖယ်ရှားနိုင်ဘဲ၊ ၎င်းသည် ဆေးခန်းများတွင် ၎င်း၏အသုံးချမှုကို ကန့်သတ်ထားသည့် ကိရိယာများနှင့် ကိရိယာများကို မှီခိုနေရပါသည်။